यस प्रश्नको जवाफ: "कसरी पुस्तकहरु को समीक्षा लेख्न?"
नियमित पढ्ने मान्छे, सोध्न भने: "तपाईं के मतलब साहित्य को एक समीक्षा?" - लाग्छ सामग्री आषा प्रतिक्रिया। अपरिचित सडक को एक Maze यात्रा एक मोटरहाक्ने व्यक्ति आफ्नो एटलस आवश्यक र व्यक्ति सोच, विचार, चित्र को पुस्तकहरु को अनन्त महासागर जोडतोडले छ, यो चुनिएको मार्ग राख्न महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, पढेर - यो सधैं समय। कि पुस्तकको समीक्षा को मिशन छ - एक व्यक्ति पूर्णतया आफ्नो चिन्ता सुनिरहेका, या बस सौंदर्य खुशी अधिकतम उत्पन्न, एक इच्छित पुस्तक खोजी गर्न निर्णय मद्दत गर्नुहोस्।
म आनन्द कि पुस्तकहरू बारेमा कुरा गर्न प्रयास गर्नुहोस्। आशा छ यो लेख, तपाईंलाई मदत गर्नेछ तपाईं बताउन कसरी उत्पादन बारेमा समीक्षा लेख्न। राम्रो हामी प्रयोग गर्नुहोस् ... अभिनय प्रविधीहरु व्याख्या गर्न। औपचारिक, तपाईं सफा पानामा (नेट "शब्द"), र तपाईंलाई लाग्छ कि पहिले: "हुँदै सुरु" अनि प्रतीकात्मक, तपाईं आफ्ना पाठकहरूलाई लागि ढोका खोल्न र दरवाजे मा, तपाईं संग, कसरी तपाईं के लाग्छ? लेखक र काम। प्रेम खेती - त्यसैले, आफ्नो मूल मिशन निर्धारित।
कवर को एक शानदार प्रदर्शन, र कुराकानी - - लेखक र आफ्नो काम आफ्नो अद्वितीय विशेषता उपकरण एक व्यापार कार्ड रूपमा सेवा गर्छन्। "प्राविधिक" साहित्य, सार्वभौमिक प्रतिलिपि अधिकार को एक समीक्षा कसरी लेख्न मा सल्लाह छ। यस परिचयात्मक वाक्यांश ध्यान - रोचक र भावनात्मक, सम्पूर्ण समीक्षाको लागि टोन सेट। पहिलो वाक्य, बरु छोटो यसको सामग्री रूपमा धेरै अधूरा हुनुपर्छ। उनको मात्र मिशन - आफ्नो पढाइ को दोस्रो वाक्य गर्न पाठक आकर्षित गर्न। दोस्रो वाक्य तेस्रो र यति मा। डी पढ्नुहोस् समीक्षा, टुकी मा पाठक कस गर्न आदर्श समान यसलाई ल्याउँछ।
समीक्षा कसरी लेख्न को विकास को दोस्रो चरण, उत्पादन कथा को प्रस्तुति पनि समावेश छ। र यो एक सारांश र पुस्तकको एक विशेष, खोसिएर नाङ्गै-डाउन सारांश सिर्जना प्रस्तुत गरेर हासिल छैन। केही एनोटेशन परिचित पुस्तकहरू लागि सिफारिस गरिएको अभ्यासहरू पूर्व-पढ्नुहोस्। शैली को नियम तपाईं अनिवार्य लेखक, कार्य विकास विवरण, परिस्थिति चरमोत्कर्षलाई सम्बन्ध चूप मानिन्छ छ। यो कथा मूलतः वर्णन, यो विवरण मा, यो आकृति delineates भने रहेको छ। को प्राप्त छाप मा -, तपाईं, फेला पार्न बुझ्न, महसुस आशा छ, पहिलो उत्पादन पढेर र त्यसपछि: पाठक यसको प्रभाव मिनी रिपोर्ट सामेल द्वारा हासिल छ प्रवर्धन छ।
काम को वर्ण संग familiarity - समीक्षा कसरी लेख्न, तेस्रो, एकदम printspialny चरण मान सिफारिसहरू। यो चरण मा प्रस्तुति को शैली ज्ञात प्रविधी स्कूल फरक छ "वर्ण पूरा कैरेक्टराइजेशन।" exhaustive जानकारी प्रस्तुत गर्न र ध्यान आकर्षित, ब्याज छैन - घर आफ्नो लक्ष्य छ। यसलाई एक निश्चित कथा लाइन वा तिनीहरूको पहिचान को आफ्नो मूल दृष्टि, originality मा नायक को "स्न्यापसट" सीमित गर्न यसकारण उचित छ।
केही कारणले, कठिनाइको अन्तिम चरण मा लेखक देखि उत्पन्न, समीक्षा कसरी लेख्न को पनि समझ। त्यहाँ प्रश्न हो। लेखक र काम "पाठक, संग बैठक" अभिनय लघु तर्क संग लाइन मा रहन: हाम्रो सिफारिस सरल छ। लेखक र काम-बिदाई र घर लाग्यौं कल्पना गर्नुहोस्। घरमा तपाईं र पाठक, तपाईं मृतक कुरा थिए थिए। तिनीहरूले आफ्नो मित्र हो, र तिनीहरूलाई संग पाठक अझै राम्रो हस्ताक्षर र परिचय जारी कि पक्कै छ छैन। यसलाई उनीहरूले आफ्नो जीवन मा बनाउन मदत गरेका छन् कि पाठक सिकाउन, सबै, गोप्य व्यक्तिगत, आफ्नो मित्र बारेमा भावनात्मक बताउन लागि समय।
छैन संकलित, पुस्तक मार्फत हेर्न र यो एउटा समीक्षा प्रकाशित गर्न लेखकहरू, लेखक, पत्रकार, तर पनि धेरै साहित्यिक समाजमा र फोरम सदस्यहरू मात्र। सधैं माग मा राम्रो, पूर्ण प्रतिक्रियाहरू, प्रकाशित छन्। समीक्षा कसरी लेख्न समझ - व्यक्तिगत साहित्यिक क्यारियर को शुरुवात लागि एक उत्कृष्ट स्प्रिंगबोर्ड। लेखक सधैं "हृदय काम मा पातलो ब्रश मा।" पुस्तकहरू मा योग्य प्रतिक्रिया मूल्यांकन गरेको
साथै, यो कार्यशाला समीक्षा अक्सर साधारण पुस्तक मदत एक bestseller बन्न कुनै गोप्य छ। त्यसैले, प्रिय पाठकहरू, तपाईंले आफ्नो साहित्यिक शैली आनन्द उठाइरहेका छौं भने, अचानक गहिरो कुनै पनि उद्धरण तपाईं रोक्न र लेखक गर्न बन्द मेरो टोपी लिन चाहन्थे भने जब, पुस्तकहरू पढेर सारियो र पढ्न लाइनहरु आफ्नो प्राण छोयो भनेर आए, अल्छी हुन छैन, हुन हामी सुखद क्षण पुस्तकको लेखक गर्न कृतज्ञ छन्, एक समीक्षा लेख्नुहोस्।
प्ले "आंधी" Aleksandra Nikolaevicha Ostrovskogo मा Kuligina छवि
सर्वश्रेष्ठ होटल रोड्स - आरामदायक बाँकी
समतल Nipples - आफ्नो बच्चाहरु कसरी breastfeed गर्न? विशेषज्ञ सल्लाह र lactating आमा: फ्लैट Nipples कसरी पुल
बवासीर लागि Enema: हामी कसरी छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ गर्न? घरमा Enemas लागि समाधान
फर्जी "बुलरन": समीक्षा। पानीको सर्किटसँग "बुलियन": प्रयोगकर्ता समीक्षाहरू
पाचन कसरी सुधार गर्न